दीर्घायु भएका यी १० मुलुक [सूचीसहित]
तस्वीर सौजन्य : काराेबार दैनिक
हामीले सञ्चार माध्यममा फलानो मुलुकमा १ सय उमेर काटेका र लामो जीवन बिताएका मानिसको बारेमा पढ्ने र सुन्ने गरेका छौ । विशेषगरी जापानीहरुको आयु लामो भएका मानिसको रुपमा चित्रित हुदै आएका छन् । हामीले यहाँ लामो आयु भएका शीर्ष १० मुलुकमा उनीहरको आयुको बारेमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौ ।
धनी मानिएको यो टापु राष्ट्रमा मानिसको औसत उमेर ८९ वर्षको हाराहारीमा रहेको छ । यो मुलुकका नागरिकले कर नतिरेपनि याहाँ विश्वकै उत्तम अवस्थाको स्वास्थ्य व्यवस्था रहेको छ । मोनाकोको सामाजिक प्रणालीले पाका उमेरका मानिसलाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउदै आएको छ । टनका टन पैसाले याहाँको अवसथालाई सहयोग गरेको छ ।
लामो आयु भएको मुलुकमा जापान दोस्रो स्थानमा रहेको छ । याहाँका मानिसको सरदर आयु पनि ८९ वर्षकै रहेको छ । जापानका मानिसको आयु लामो हुनुमा याहाँको सरल जीवनयापन, नियमित व्यायाम, र सास फेर्नका लागि राम्रा हावालाई मानिएको छ । विशेषगरी ८० भन्दा माथिको उमेर बाच्नका लागि याहाँका मानिसलाई सीपूmड र तरकारीले सहयोग गरेको छ ।
यो मुलुकको औसत उमेर उल्लेख नगरिएपनि याहाँका मानिसको आयु पनि लामो रहेको छ । याहाँका मानिसले नियमित रुपमा चिकित्सकलाई जचाउने र शारीरिक व्यायाम गर्नाले याहाँका मानिसको औसत आयु पनि जापानपछिको स्थानमा रहेको छ । यो पृथ्वीकै सुरक्षित मुलुक मध्येम परेको छ ।
यो मुलुकको औसत उमेर ८४ वर्षको रहेको छ । याहाँका मानिसहरु आप्mनो मुलुकमा सञ्चालन हुदै आएको जुवामा गर्व गर्छन् । सरल जीवन, प्रसस्त मात्रामा व्यायाम र दैनिक जीवनयापनको स्वस्थ व्यवहारले याहाँका मानिसको आयुलाई राम्रो बनाएको छ ।
५. सान मारिनो
याहाँ धेरै कामकाजी उमेरका मानिसहरु औद्योगिक मजदुरको रुपमा काम गर्नु भन्दा पनि कार्यालयको काममा व्यस्त हुने गरेका छन् । यो मुलुकको औसत उमेर ८४ वर्षको रहेको छ । याहाँका मानिसहरु वाइन पिउने मामिलामा अग्रणी देखिएका छन्. ।
लामो औसत आयु भएका मानिसको तुलनामा यो मुलुक पनि अग्रणी देखिएको छ । याहाँका मानिसको औसत आयु ८३ वर्षको रहेको छ ।
युरोपकै गरिब मुलुकदेखि पर्यटकका लागि राम्रो थलोको रुपमा विकास भएपछि यो मुलुकको भाग्यनै फेरिएको छ । दोस्रो विश्व युद्धको शीकार भएको यो मुलुक युद्धलेनै जीवनका लागि राम्रो थलोको रुपमा विकास भएको छ । यो मुलुकको औसत आयु ८२ वर्षको रहेको छ ।
यो मुलुक लामो औसत आयुको मामिलामा मात्रै होइनकी खुसी मुलुकको सूचीमा पनि अग्रणी रहेको छ । यो मुलुकमा शुद्ध हिमाली हावा बहन्छ र दृश्यको रुपमा व्यापक सुन्दर रहेको छ । याहाँको औसत आयु ८२ वर्ष माथि छ ।
मकाउको जस्तै हङकङका नागरिकहरु पनि लामो र स्वस्थ जीवन व्यथित गर्दै आएका छन् । यो मुलुकको औसत आयाु ८२ वर्षको रहेको छ ।
औसत उमेरको मामिलामा यो मुलुक दसौ उत्कृष्टमा पर्न सफल भएको छ । काराेबार दैनिकमा खबर छ ।